UNhleko uzonekela izwe umbiko waseNkandla | News24
UNhleko uzonekela izwe umbiko waseNkandla
Cape Town – Kulindeleke ukuthi uMengameli Jacob Zuma azi ukuthi kumele akhokhe noma angakhokhi ngokuthuthukiswa komuzi wakhe oseNkandla njengoba uNgqongqoshe wamaPhoyisa uNkosinathi Nhleko ezokhopha umbiko.
UNgqongqoshe uNhleko kulindeleke ukuthi abambe ingqungquthela nabezindaba ngoLwesithathu kusihlwa lapho ezodedela khona lo mbiko osekunesikhathi ulindiwe.
Le ngqungquthela nabezindaba ezoba namhlanje kusihlwa izoqala ngehora lesi khombisa ePhalamende kanti izosakazwa bukhoma eziteshini ezahlukene zikamabonakude.
OLUNYE UDABA: Umasipala ugcine ugobe uphondo ngolwamatekisi
Ngokubika kwe-Eyewitness News lo mbiko kangqongqoshe uqukethe amakhasi angu-50.
Sekuphele cishe unyaka uMvikeli woMphakathi uThuli Madonsela akhipha umbiko ngokuthuthukiswa komuzi kaMengameli Jacob Zuma oseNkandla.
Kulo mbiko uMadonsela wadalula ukuthi umengameli nomndeni wakhe bazuza ngokungemthetho ngokuthuthukiswa kwalo muzi ngesamba sika-R246m kanti kumele akhokhe isamba esithile esasetshenziswa kwakhiphe izinto ezingahlangene nezokuphepha.